Shina simenitra fanamboarana sy fanodinana visy | Jusheng
Conveyor an'ny visy simenitra amidy
Conveyor Srew izay ampiasaina amin'ny fampitana vovoka, granular ary sombin-javatra kely misy tsiranoka. Ny masinina ataontsika dia ampiasaina betsaka amin'ny zavamaniry fampifangaroana beton, zavamaniry fampifangaroana asphalt, feed, indostrian'ny simika ary indostria hafa; dia azo ampiasaina hitaterana simenitra, lavenona manidina, vovo-mineraly, fasika, ranomandry ary fitaovana hafa. Endri-javatra vokatra: ny masinina visy dia vita amin'ny fantsom-by avo lenta, matanjaka sy mafy orina ary manana fahamendrehana tsara. Ny elanelam-peo avo roa heny dia mampihena ny haavon'ny famatrarana mandritra ny fitaterana ara-materialy. Izy io dia mandray boaty fitaovana avo lenta, famolavolana asa mavesatra, torolàlana lehibe ary tabataba ambany. Ny volo baolina iraisana tsy voatery atao dia manamora ny fametrahana sy ny fanitsiana ny familiana. Ampiasaina miaraka amina bearings fampiatoana avo lenta sy bearings amin'ny rambony, ny isan'ny faritra sy ny kozatra dia kely, mateza, mora tazomina, mahazatra ny fidirana sy ny fivoahana ary haingana ny fametrahana
<5 1000/5/3 2000/7 / 5.5 2000/7 / 7,5 3000/10/11
<6 1000/5/3 2000/7 / 5.5 2000/7/11 3000/10/15
<7 1000/5/4 2000/7 / 7,5 2000/7/11 3000/10/15
<8 1000/5/4 2000/7 / 7,5 2000/7/11 3000/10 / 18.5
<9 1000/5/4 2000/7/11 2000/7/15 3000/10 / 18.5
<10 1000/5 / 5.5 2000/7/11 2000/7/15 3000/10/22
<11 1000/5 / 5.5 2000/7/11 2000/7/15 3000/10/22
<12 1000/5 / 7.5 2000/7/11 2000/7/15 3000/10/22
Ny haben'ny conveyor amin'ny visy dia azo atao hatramin'ny ∮168 ka hatramin'ny 323, ny mari-pahaizana sy ny halavan'ny fironana dia azo alamina.
fanamarihana: 1, 1000/5 / 5.5, "1000" ho an'ny karazana boaty ho an'ny kitapo, "5" ho an'ny tahan'ny fihenam-bidy, "5.5" ho an'ny herin'ny motera (380V / 50Hz / 3P, 1450rpm);
2. Fanamboarana fenitra môtô: 380V, 50Hz, 1450rpm, dingana telo, manana fepetra takiana manokana ny mpanjifa;
3. Raha misy toe-javatra manokana, dia afaka misafidy arakaraka ny toe-javatra misy ny herin'ny maotera (amin'ny teboka mitsikera, safidio ny herin'ny rakitra manaraka).
Ny masinina visy dia vita amin'ny fantsom-by tsara kalitao sy matanjaka ary mafy orina. Ny elanelam-peo avo roa heny dia mampihena ny haavon'ny famatrarana mandritra ny fitaterana ara-materialy. Izy io dia mandray boaty avo lenta, famolavolana asa mavesatra, torolàlana lehibe ary tabataba ambany. Ny volo baolina iraisana tsy voatery atao dia manamora ny fametrahana sy ny fanitsiana ny familiana. Ampiarahana amin'ny bearings fampiatoana avo lenta sy bearings amin'ny rambony, ny isan'ny faritra sy ny faritra dia kely, mateza, mora tazomina, mahazatra ny manafatra sy manondrana ary mametraka haingana
Ny singa fototra amin'ny conveyor visy: motera, boaty fihenam-bidy, fantsom-pitaovana ivelany, mandrelika spiral, Shaft crane eo afovoany, fitaterana rambony, iraisan'ny rehetra, flange miditra. Ny mampiavaka azy dia: kely haben'ny, ambany tabataba, famehezana tsara, lamba, Mety ny birao.
Famaritana ny masontsivana ara-teknika lehibe: maodely, mampita ny halavany, manome zoro, mampita boky, fifandraisana amin'ny seranan-tsambo Fomba fifandraisana:
Savaivony A B C D
Rafitra fanangonam-bokatra mandeha ho azy, Concrete Mixer Spare Parts, Fitaovana fampiroboroboana zezika mandeha ho azy, Masinina mitambatra mandeha ho azy, Rafitra fanangonam-bokatra mitambatra, Rafitra fanangonana mitambatra,